Milkiilaha Mustaqabalka Ee Gunners – Waa Maxay Sababta Uu Daniel Ek U Gudbin La’yahay Dalabkiisii Ugu Horreeyay? – Garsoore Sports
Milkiilaha Mustaqabalka Ee…
Taasi waa su’aasha is weydiint mudan, kaddib markii ay soo shaacbaxeen wararka sheegaya in maalqabeenka u dhashay dalka Iswiidhan uu sheegay inuu doonayo inuu la wareego milkiyadda kooxda Kubbada-cagta ee Arsenal.
Khabiirka kubbada-cagta ee Sky Sports ’Kaveh Solhekol ayaa maanta shaaca ka qaaday in Daniel Ek ay wali si buuxda uga go’an tahay iibsashada naadiga Arsenal balse waxa uu shaaca ka qaaday sababta dib u dhigeysa inuu ku dhaqaaqo dalabkiisii ugu horreeyay.
Dhowaan ayay ahayd markii ay soo baxeen wararkan sheegaya xiisaha Daniel Ek, balse wax yar kaddib waxaa yaraaday hadal heyntii loo hayay.
Taasina waxaa caadiyan dabka ku shidayay taageerayaasha Arsenal, oo aad u doonaya in wax laga beddelo milkiyada kooxda.
Jamaahiirta Gunners ayaa karaahsaday milkiiye Kroenke waxaana ay todobaadkii tegay sameeyeen banaanbaxyo waaweyn oo ay ku muujinayaan caradooda.
Qofna ma’ogayn inuu Ek soo gali doono liiska dadka daneenaya inay Arsenal la wareegaan balse maalqabeenka iskaleh shirkada muusikada ee Spotify ayaa caadiyan noqon doona milkiilaha ay ku riyoonayaan dhammaan jamaahiirta Arsenal isagoo wax xoogaa rajo ah ku yara beeray taageerayaasha.
Khabiirka Sky Sports ee Solhekol ayaa shaaca ka qaaday sababta Ek uusan wali u gudbin dalabkiisa Kroenkes. Jawaabtiisa kaliya waxay muujineysaa in bilyaneerka reer Sweden uu runtii Arsenal la doonayo waxa ugu fiican.
Isagoo la hadlaya Sky Sports ayaa waxa uu yiri: “Milkiilaha Spotify Daniel Ek waxaa gebi ahaanba ka go’an inuu isku dayo inuu iibsado Arsenal inkastoo wixii xalay ka dhacay Emirates Stadium ay niyadjabineyso dhammaan jamaahiirta kooxda. “
“Dabcan, guuldarradii Arsenal ay xalay kaga hartay Europa League-ga waxay la micno tahay inaysan u badneyn inay ka ciyaaraan Yurub xilli ciyaareedka soo socda.” Ayuu raaciyay
“Ek ayaa lagu wadaa inuu sameeyo dalab furitaan ah, laakiin ma uusan dooneynin inuu sameeyo dalabkaas ka hor ciyaartii xalay sababtoo ah ma uusan dooneynin inuu jahwareer ku sababo cayaartooyda iyo Mikel Arteta.”
“Xalay waxba isma bedelin. Waxa uu doonayaa inuu iibsado Arsenal, waxaana uu heystaa lacag uu ku iibsan karo. ”